Izinzuzo Zokushisa Ukushisa, Izinsiza Zokushisa Ze-DaWei
yiziphi izinzuzo zokushisa okufakwayo, ukukhwabanisa, ukuqina, ukucibilika nokugxila, njll?
Kungani ukhetha ukushisa ukushisa ngaphezu komlilo ovulekile, ukuxhuma, ukuvutha noma enye indlela yokushisa? Nansi isifinyezo esifushane sezinzuzo ezinkulu zesimo samanje esiqinile sokushisa ukuhlinzekwa okuhlinzekwa ukukhiqiza okuqinile:
* Ukushisa Ngokushesha
Ukushisa ukushisa idonswa ngaphakathi kwengxenye uqobo ngokushintsha amandla kagesi. Ngenxa yalokho, i-warpage yomkhiqizo, ukuhlanekezelwa kanye namanani enqatshiwe ancishisiwe. Ukuze uthole ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo, ingxenye ingahlukaniswa ekamelweni elivalekile nge-vacuum, inert noma ukunciphisa umkhathi ukuqeda imiphumela ye-oxidation. Amanani okukhiqiza angakhuliswa ngoba ukungeniswa kusebenza ngokushesha okukhulu; ukushisa kuthuthukiswa ngqo futhi khona manjalo (> 2000º F. ku <1 isekhondi) ngaphakathi kwengxenye. Ukuqalisa kucishe kwenzeke; akudingeki umjikelezo wokufudumala noma opholile. Inqubo yokushisa yokungeniswa ingaqedwa esiteji sokukhiqiza, eduze komshini obandayo noma oshisayo, esikhundleni sokuthumela izinqwaba zezingxenye endaweni ekude yesithando somlilo noma kosonkontileka abancane. Isibonelo, inqubo yokubhinca noma yokufaka izinsimbi ngaphambili eyayidinga isikhathi sokudla, indlela yokushisa ye-batch engekho emgqeni manje ingasuswa ngohlelo oluqhubekayo lokukhiqiza ukugeleza okukodwa.
* Ukushisa okuhambisanayo
Ukushisa kwe-Induction kuqeda ukungahambisani nezinkinga zekhwalithi ezihlobene
nge-flame evulekile, ukushisa okukhanyisa nezinye izindlela. Uma uhlelo selungisiwe kahle futhi lusetha, akukho msebenzi wokuqagela noma ukushintshashintsha; iphethini yokushisa iyaphinda futhi iguquke. Ngezinhlelo zesimanje eziqinile zombuso, ukulawula okushisayo okushisa kunikeza imiphumela efanayo; amandla angashintshwa noma avaliwe ngaso leso sikhathi. Ngokuvala ukushisa kokushisa kwe-loop, kuthuthukile ukushisa ukushisa izinhlelo unamandla okukala izinga lokushisa kwengxenye ngayinye. Izinga elithile le-ramp up, hold and ramp down lingasungulwa futhi idatha ingaqoshwa engxenyeni ngayinye esebenza.
* Ukushisa Ukuhlanzeka
Izindlela zokushisa zokushisa ungashisi amafutha asendabuko; Ukwenyuswa kuyindlela ehlanzekile, engeyona engcolisayo ezosiza ukuvikela imvelo. Isistimu yokungeniswa ithuthukisa izimo zokusebenza zabasebenzi bakho ngokuqeda umusi, ukushisa okushisayo, ukukhishwa okuthusayo nomsindo omkhulu. Ukushisa kuphephile futhi kuphumelelayo kungekho flame evulekile yokufaka umonakalo ku-opharetha noma ukungafihli inqubo. Izinto ezingahambisani nokuziphatha azithintekile futhi zingasondelana eduze nomoya wokushisa ngaphandle kokulimala.
* Gcina Amandla
Ukukhathala kokwandisa izikweletu zesevisi? Le nqubo yodwa ephumelelayo yamandla iguqula kuze kufike ku-90% yamandla asetshenzisiwe amandla okushisa; ama-batch ishiyagalombili ngokuvamile kuphela i-45% ene-energy ephumelelayo. Futhi njengoba ukufakwa kwe-induction akudingi umjikelezo ofudumalayo noma opholile, ukuma kokushisa okushisa kuncishisiwe. Ukuphindaphinda nokuvumelana kwezinqubo zokufakelwa kwenza kube kuhambisana kakhulu nezinhlelo ezizenzakalelayo ezisebenza ngamandla.